Katrina Kaif Oo Shaaca Ka Qaaday Sababta Ay U Diiday Inay Arjun Kapoor La Sameyso Filimka Half Girlfriend - Hablaha Media Network
Katrina Kaif Oo Shaaca Ka Qaaday Sababta Ay U Diiday Inay Arjun Kapoor La Sameyso Filimka Half Girlfriend
HMN:- Filimka Half Girlfriend shaqadiisa waa gabo gabo waxaana hogaamiyaal ka ah Arjun Kapoor iyo Shraddha Kapoor halka uu Director ka yahay Mohit Suri waana filim siweyn loo sugaayo.
Hadaba Katrina Kaif ayaa shaaca ka qaaday inay iska diiday sameynta filimka Half Girlfriend sidoo kalena xidigtaan waxaa lagu badalay Shraddha Kapoor.
Katrina ayaa sheegtay inay ka heshay sheekada filimka Half Girlfriend sidoo kalena aad u tixgalisay codsiga Director Mohit Suri.
Balse ugu dambeyntii Katrina waxay Director Mohit Suri u sheegtay in atirisho dhalin yar filimkaan loo dhiibo sidoo kalena aysan isku soo baxeynin ayada iyo Arjun Kapoor madaama ay da’ahaan ka weyn tahay.
Katrina ayaa laga soo xigtay inay nasiib u leedahay la shaqeynta atoorayaasha da’ahaan iyada ka weyn sida Salman Khan, Akshay Kumar, Aamir Khan, Hrithik Roshan iyo Shah Rukh Khan.
Balse xidigtaan markii ay sanadkaan la shaqeesay atoorayaal da’ahaan iyada ka yar sida Aditya Roy Kapur iyo Siddharh Malhotra jab ayaa ka raacay.
Sidaas ayayna u diiday inay Arjun Kapoor filimka Half Girlfriend u sameyso waxaana lagu badalay Shraddha Kapoor oo Arjun Kapoor filimkaan la sameeneyso.